Cuntooyinka tofu-ka ah ee 2 waa inaad dhadhamisaa - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RESAY
ACCUEIL » rasiidhada »Cuntooyinka tofu ee 2 waa inaad dhadhamisaa - Caafimaadkaaga hagaajiya
Cuntooyinka tofu ee 2 waa inaad dhadhamisaa - Caafimaadkaaga hagaaji
Farmaajo laga sameeyay soy caano waxaa loo yaqaanaa tofu. Ku badan borotiinka iyo dufanka yar, tofu sidoo kale waa il muhiim ah oo kaalshiyam ah iyo fiitamiinno. Taasi waa sababta aan halkan kuugu kugu casuumeyno si aad u ogaato laba cunno tofu macaan.
Sida aan kuu sheegnay, tofu waa cunno ku saleysan geedo laga sameeyay caano soy. Hawshu waxay aad ugu egtahay tan jiiska. Laakiin si ka duwan farmaajo dhaqameed, Tofu ma ku jirto laktik, sidaa darteed waa cunno kufilan kuwa u adkeysan kara karbohaydraytyada.
Intaa waxaa sii dheer, dhadhankiisu waxaay ka dhigaysaa mid iskufilan: waa macquul in lagu diyaariyo siyaabo badan waxayna si wanaagsan ula socotaa dhammaan waxyaabaha ay ka kooban tahay. Maaha in la xuso faa iidooyinkeeda ...
Saamaynta faa'iidada tofu
Cuntadan ku saleysan geedka waxay hodan ku tahay borotiin tayo sare leh: Waxay ka kooban tahay sideed acids amino muhiim ah
Waxay bixisaa aashitooyinka dufanka leh, fitamiin E iyo lecithins, kuwaas oo caawiya yaree heerarka kolestaroolka iyo heerka triglyceride
Intaa waxaa dheer, Cuntadani waxay hodan ku tahay kaalshiyamka (159 mg oo kaalshiyam ah ee ku jirta qayb kasta oo ah 100 g), bir, zinc, iyo macdanaha kale iyo fiitamiinnada kale
Maaddada isoflavone-ka, oo ay weheliso kaalshiyamka iyo borotiinka, waxay sameysaa tofu waa cunno kufilan dheellitirka heerarka estrogenka. Taasi waa sababta cuntadaani gaar ahaan u tahay lagula taliyay haweenka marxaladda caadada
Cuntadan sidoo kale waa sare ee fiber iyo kaloori hooseeya
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jiraan dhammaan faa'iidooyinka faa'iidooyinka leh, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in soy iyo dhammaan waxyaabaha ka soo baxa soya ay ku jiraan tiro aad u fara badanoxalate. Dadka leh dhibaatooyinka kalyaha, sida dhagxaanta kilyaha, waa inay ka fogaadaan isticmaalka tofu.
Qeybta kale ee maqaalkan, waxaad ku ogaataa laba nooc oo ah cuntada loo yaqaan 'tofu' oo macaan. Abwaanku!
Cuntada tofu ee la kariyey
Marka cuntada la diyaariyo, waxay u adeegi kartaa sidii shay ama aasaaska saxannada kale.
Tallaabada ugu horreysa waa in loo diyaariyo marinade si loo karinayo. Sidaas darteed, baaquli ku dhex shub, ku shub saliida saytuunka ah, ka dibna ku dar khafiifka toonta hore ee la dubay iyo dhir udgoon, oo ah thyme iyo oregano. Milix iyo basbaas sidaad rabto.
Ka dib si fiican u walaaq si aad u hesho isku dhafan, ka dibna soo bandhig tofu hore loo googooyay. Ha ilaawin inaad tuujiso ka hor intaadan ku darin marinade. Tofu ha uumoo dhadhan marinade. In alla intii aad ka tagto, ayaa ugufiican. Sida ugufiican ayaa ah in loo oggolaado in ay kululeyso afar ama shan saacadood. Kala-baxa, kala-jajabka guntimaha si aad u xaqiijiso xitaa ubucda.
Mar alla afartii ama shantii saacadood ee la soo dhaafay, bur saar saar nafaq iyo sisinta. Burka ayaa loo isticmaali doonaa in lagu duugo gogo 'tofu.
Hadda waa waqtigii la isku shiili lahaa gogo 'tofu. Jaakada dhexdeeda, ku shub dhibic wanaagsan oo saliid saytuun ah una oggolow inaad si fiican u kululayso. Mar alla markii saliidu kulushahay, waxaad shiil qeybaha tofu illaa ay u rogaan midab dahabi ah oo fiican.
Gabballada tofu saar waraaqaha waraaqaha si aad uga saartid saliida xad dhaafka ah.
Tani waa! Waxaad hadda ku raaxeysan kartaa cuntooyinka tofu ee la kariyey oo la dubay.
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiiseyneyso: Cuntada xawaashyada bocorka bocorka leh ee macaan: ha iloobin!
Tofu steak karinta
Tofu waa cunnada ugu weyn ee halkan lagu diyaariyo vegan steaks delicious.
Adiga ayey kugu jirtaa inaad doorato wehelnimada!
250 g tofu (oo aan aad u jilicsan)
Digsi ama dhir
Basbaaska madow ee dhulka
Marka hore, dhaq, diirka karoora oo basal. Basalsha ku kari digsi weelka saliidda saytuunka ah ilaa uu ka noqonayo midab dahabi ah oo fiican oo uu jilco. Sii dhig diyaarinta xilli dambe.
Hadda gooy coriander iyo toon ah toon aad u macaan. Waad caawin kartaa isku darka. Ka dib ku dar tofu oo sii wad garaacista ilaa aad ka hesho isku dhafan dhammaystiran.
Hadda waa waqtigii lagu dari lahaa maaddooyinka soo socda isku darka: basasha, ukunta, rootida rooti iyo basbaaska cas. Milix iyo basbaas sidaad rabto, ka dib walaaq wax kasta si aad u hesho isku dhafan dhammaystiran. Fikradda ayaa ah in la helo koollo la ridi karo oo aad cajiin karto si aad u abuurto qaabka hamburger cabirka aad doorato.
Hadda waa waqtigii aad ku quudin lahayd hilibka digaaga adigoo ku duub burka (doorashadaada). Iyaga isku kari ilaa dhibic saliid saytuun ah.
Ku darso stekooyinkaaga kulul kuleylka dhinaca aad ugu jeceshahay. Sidoo kale waad ku cuni kartaa rootida hamburger!
Marka la soo koobo ...
Waxaad hadda heshay laba raashin oo keliya.
Waxaan ku xasuusineynaa tofu inuu yahay cunno aad u wanaagsan. Siyaabo kala duwan ayaad ugu diyaarin kartaa: foornada, khudradda, hilibka, saladh, burush, rootiyo ... Waxaa jira xitaa macmacaanka tofu. Intaa waxaa sii dheer, si wanaagsan ayey ula socotaa dhammaan waxyaabaha ay ka kooban tahay. Sababahan dartood oo dhan, ha ka labalabeyn inaad ku dhex dartid saxamadaaga!
4 Delicious Legume Salad Salad ah
Iyada oo lagu daro saladhyada ku saleysan doogga ee cuntadeena, waxaan ku raaxeystaa dhadhanka cuntooyinkan iyo nafaqooyinkooda. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/2-recettes-a-base-de-tofu-que-vous-devez-gouter/
2 veggie stekite steak for hamburgers aad u baahan tahay inaad dhadhamiso - Caafimaadkaaga hagaaji